खोप लगाएको दुई दिनपछि नै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खानलाई कोरोना सङ्क्रमण – yuwa Awaj
खोप लगाएको दुई दिनपछि नै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खानलाई कोरोना सङ्क्रमण
चैत्र ८, २०७७ आइतबार 6
काठमाण्डाै – खोप लगाएको दुई दिनपछि नै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई को’रोना भा’इरसको सङ्क्र’मण पुष्टि भएको छ ।
को’रोना पुष्टि भएपछि उहाँ आइसाेलेशनमा बस्नुभएको पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य विज्ञ फैसल सुल्तानले बताउनुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री खानमा हल्का खोकी र ज्वरोसहितको मध्यम लक्षण देखिएको पनि सुल्तानले जानकारी दिनुभएको छ ।
उहाँले बिहीवार मात्रै को’रोना विरु’द्धको खोपको पहिलो डोज लगाउनुभएको थियो । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खान पछिल्ला दिनमा मास्क नलगाइकनै विभिन्न भेला, बैठक र आमसभामा सहभागी हुँदै आउनुभएको थियो । पाकिस्तानमा पछिल्लो महिनायता सङ्क्र’मितको संख्या बढ्दै गएपछि केहि सहरमा आं’शिक लकडाउन लगाइएको छ ।
स’ङ्क्रमितको बढ्दो संख्याले चिन्तित बनाएको र जो’खिमपूर्ण तेस्रो लहरको खत’रा रहेको प्रधानमन्त्री खानको भनाइ छ । पाकिस्तानमा अहिलेसम्म ६ लाख १५ हजार जनामा को’रोना पु’ष्टि भएको छ भने १३ हजार सात सय भन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको छ ।
Prevविजय लामा भन्नुहुन्छ : कुलमान हुँदा नभएको लोडसेडिङ अहिले किन ?
Nextरुकुममा उत्पादित सिस्नु ‘पाउडर’ को माग बढ्दो
गौरी मल्ल भन्नुहुन्छ : राष्ट्रपति ज्यू ! मलाई यो देशको नागरिक हुँ भन्न लाज लाग्ने अवस्था आयो, अब केही त बोल्नुस् !
जनता समाजवादीले फिर्ता गरेन सांसदहरूको दसैं भत्ता !